Miyaad i tusi kartaa hababka ugu fiican ee dib loogu soo celiyo SEO?
Looma baahna in la yiraahdo in dhismaha xiriirku uu dhawaan noqday mid aad uga muhiimsan Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) intii aan horay loo arag. Taasina waa sababta ay dib-u-helid cusub - dabiici ahaan iyo jir ahaanba - waa MUST loogu talagalay mulkiilaha websaydhka iyo mulkiilaha oo raba inuu horumar weyn ku yeesho SEO, iyadoo mashaariicda internetka lagu arkay natiijooyinka raadinta ugu sareysa. Aynu wajahno - helno backlinks cusub oo run ahaantii u shaqeynaya horumarinta internetka ee wanaagsan ma ahan oo keliya kalsoonidooda ama caan ka noqoshadooda. Waxaan u jeedaa in dhismaha xiriirka dabiiciga ah uu dhab ahaantii u taagan yahay inuu keeno qiimo dhab ah website-kaaga ama blog -ka ugu dambeyntii, inaad ku qaadato hogaaminta tartanka nuucan oo aad ka dhigto mashruucaaga qiimaha la wadaago, xusuusashada iyo isku xirnaanta. Sidaas awgeed, ma jirto baahi loo qabo in lagu degdego isku dayida in la buuxiyo tirada ugu badan ee dib u noqoshada cusub. Waxay u fiicnaan laheyd in la xoojiyo tayada tayada iyo dabeecada dabiiciga ah - marka hore iyo ugu horreyn. Taas oo kale, aan kuu tuso habab la adeegsan karo oo lagu baranayo barashada cusub ee habka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah -.
Ka hor intaan wax kale, bogga internetka ama blog kasta waa inay lahaadaan bogag adag oo bixiya qiime weyn oo loogu talagalay dadka dhagaysta xiisaha leh dadka isticmaala ama bartilmaameedka macaamiisha laga yaabo in la filayo in lagu beddelo macaamiisha dhabta ah. Habkaas, gaar ahaan boggaga internetka waxaa lagu aqoonsan karaa Google sida aad u doorbidayso si aad u ballaadhan online, halkii aad ka heli lahayd bogag ama bogag kale oo la xidhiidha mawduuca mawduuca ama ganacsiga isku mid ah. Maxaa badanaa - ku soo laabashada dhabarka cusub oo leh waxyaabo u gaar ah oo tayo sare leh micnaheedu waa inaad ka faa'iideysan doonto xiriirka ka dhaxeeya xiriirada caadiga ah, oo sidoo kale loo yaqaano kuwa ugu awoodda badan ee White-Hat SEO.
Qoondaynta Muuqaalka iyo Sawir-qaadidda
Tixgeli qayb ka mid ah qoraallada qoraalkaaga (ama ugu yaraan kuwa ugu caajis badan) hababka qaar oo si fiican u-fiicnaaday oo hubaal ah oo ah qaabab badan oo muuqaal ah oo muuqaal muuqaal ah. Taas micnaheedu waxaa weeye in lagugula taliyay inaad maalgashato waqtigaaga si aad u abuurto qaababka ugu caansan ee mawduucyada macquulka ah ee laga filan karo in ay kuu keenaan gaadiidka webka ee weyn, iyo soo jiidashada ugu badan dib u qabashada waqti isku mid ah - ku dhowaad isku kalsoonaan. Habkaa, waxaad ku fiicnaan laheyd inaad abuurto aragti rafcaan leh, jaantusyo, sawirro leh qiimaha dheeraadka ah ee kaa dhisi doona dib u qabasho dheeraad ah iyada oo loo marayo mustaqbalka fog.
Martida martida ee dhisto hay'adaada
U dirista qaar ka mid ah bloggerada caanka ah ee ku jira niche ama kuwa ugu sareeya ee ku lug leh ee la xidhiidha ganacsigaaga ganacsi waa wado fiican ma aha oo kaliya inaad kasbato laba dib-u-celin oo cusub oo leh PageRank aad u xoog badan, laakiin si aad u dhisto awooddaada iyo kalsoonidaada ee isticmaalayaasha. Ugu dambeyntii - si aad u noqoto hogaaminta ugu muhiimsan aqoonta khibradda leh ee beerta, sidaas darteed qaadashada hogaanka iyo samaynta website-kaaga ama blog-kaaga oo ka soo baxa tartanka raadinta. Isla markaa, si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin in mar kasta oo aad u soo dirto boostada martigalinta tayada marti-galiyahaaga - waxaad kasbatay inaad u qalantid backlinks si aad u hoggaamiso xitaa kuwa aad u daacad u ah boggagaaga Source . Kaliya hubso inaad qorayso maqaallo quruxsan oo aad u fiican oo kaliya oo ku-qori kara jumladaha blogka ee ujeedada saxda ah - oo la sameeyo!